Kubuntu 19.10 ngoku iyafumaneka, yazi ukuba yintoni entsha | Ubunlog
Ubumnyama | | Kubuntu
Namhlanje iCanonical ikhutshiwe Kuluntu jikelele Inguqulelo entsha ye ukuhanjiswa kweLinux, Ubuntu 19.10 Eoan Ermine (ungazazi iinkcukacha zayo kwiposti elandelayo) kunye nezinye iinguqulelo ezintsha zezinye iincasa zazo nazo zakhutshwa, esiza kuthetha ngayo kweli nqaku Ubuntu 19.10.
Uninzi lwenu luya kwazi UKubuntu yenye yeencasa zobuntu ezisemthethweni ezithi ngokungafaniyo nohlobo oluphambili olusebenzisa imeko ye-desktop yeGnome, Kubuntu isebenzisa imeko-bume ye KDE desktop.
1 Iimpawu ezintsha zeKubuntu 19.10
2 Khuphela kwaye ufake uKubuntu 19.10
Iimpawu ezintsha zeKubuntu 19.10
Kwiindaba zikaKubuntu 19.10 sinokuyifumana loo nto abo bafika no-Ubuntu 19.10 bayabonakala njenge ukwaziswa kweKernel 5.3 Njengombindi wenkqubo, kunye nayo I-algorithm ye-LZ4 iyasetyenziswa, eya kunciphisa ixesha lokuqalisa ngenxa yokwehla ngokukhawuleza kwedatha.
Enye into entsha ekhapha uKubuntu 19.10, evela Ubuntu, ukusukela oko kufakelo lomfanekiso omtsha wenkqubo ngokweNVIDIA, iinyanda ezinomqhubi we-NVIDIA ofanelekileyo zibandakanyiwe.
Ke, kubasebenzisi benkqubo abanee-chips ze-NVIDIA zemizobo, abaqhubi abanelungelo lokuthengisa baya kubonelelwa ngexesha lofakelo, kunye nabaqhubi basimahla beNouveau abaqhubeka nokunikezelwa ngokungagqibekanga.
Abaqhubi beproprietary bayafumaneka njengenketho yokufaka ngokukhawuleza emva kokuba ufakelo lugqityiwe.
Eli nqaku litsha liza emva kokuba umsebenzi wenziwe ukwandisa uzinzo ngokusetyenziswa komqhubi we-NVIDIA kunye nokwenza ngcono ukusebenza kunye nokunikezela umgangatho kwiinkqubo ezinamakhadi emizobo ye-NVIDIA.
Kwelinye icala, sinokuyifumana loo nto Indawo yokugcina le nguqulo intsha iyekile ukuhambisa iiphakeji zokwakha ezingama-86-x32.
Ke, ukuqhuba usetyenziso lwe-32-bit kwindawo engama-64-bit, ukuhlanganiswa kunye nokuhanjiswa kweseti eyahlukileyo yeephakeji ezingama-32-bit ziya kubonelelwa, kubandakanya izinto eziyimfuneko ukuqhubeka nokusebenza kweenkqubo eziphelelwe lixesha ezihlala zikwimo engama-32 kuphela. ifuna iilayibrari ezingama-32.
Ngokuphathelele kwiindaba ezizodwa zeKubuntu, sinokuyifumana loo nto le nguqulo intsha ibonelela nge-KDE Plasma 5,16 uguqulelo lobume be desktop, Zonke izinto ezinqabileyo zolu hlobo lwendalo zidityaniswe kwi-Kubuntu 19.10.
Enjalo imeko ukudityaniswa kwezicelo ze KDE 19.04.3 kunye nesakhelo seQt 5.12.4. Inguqulelo esinokuqaqambisa kuyo umphathi wefayile yeDolphin usebenzisa izithombisi fumana enye imbonakalo yeMicrosoft Office, iifayile zePCX (Iimodeli ze3D) kunye neencwadi ze-e-fb2 kunye neefomathi ze-epub.
Izinto zongezwe kwimenyu yomxholo ukongeza kunye nokususa iithegi. Ngokuzenzekelayo, izikhombisi ze- "Downloads" kunye ne "Recent Documents" azihlelwa ngegama lefayile, kodwa lixesha lotshintsho.
Umhleli wevidiyo IKdenlive iphinde yenziwa ngokutsha ngokutsha, Ngotshintsho oluchaphazela ngaphezulu kwama-60% ekhowudi. Ukuphunyezwa komda wexesha kubhalwe ngokutsha kwiQML.
Umbukeli wexwebhu le-Okular unomsebenzi wokuqinisekisa iifayile ezisayiniweyo zePDF. Useto lwesikali longezwa kwidayalog yoshicilelo. Yongeza imo yokuhlela uxwebhu lweLaTeX usebenzisa i-TexStudio.
Kukwaqaqanjiswe ziinguqulelo ezihlaziyiweyo ze-latte-dock 0.9.2, Elisa 0.4.2, Yakuake 08.19.1, Krita 4.2.7, Kdevelop 5.4.2 kunye neKtorrent.
Olunye uhlobo olutsha lukaKubuntu 19.10 kukuba kule nguqulo Uvavanyo lwenziwe ukuba lwenziwe kwiseshoni yePlasma eWayland. Oku kunokwenzeka kuphela ngokufaka ipakeji yeplasma-indawo yokusebenzela-wayland kwinkqubo.
Oku kuyakongeza iseshoni yePlasma (wayland) kwiscreen sokungena (ekufuneka sikhethwe ngabo banomdla wokuzama le seshoni). Abasebenzisi abafuna amava okuzinzile edesktop kufuneka bakhethe ukhetho oluqhelekileyo lwePlasma (ngaphandle kweWayland) xa ungena.
Khuphela kwaye ufake uKubuntu 19.10
Kulungiselelwe abo banomdla wokukhuphela le nguqulo intsha yeKubuntu 19.10, baya kuba nakho ukuyenza kwiindawo zokugcina Ubuntu, ikhonkco yile.
Ukusukela iphepha elisemthethweni laseKubuntu alikawahlaziyi amakhonkco ukukhuphela ingxelo entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Kubuntu 19.10 ngoku iyafumaneka, yazi ukuba yintoni entsha
Ubuntu MATE 19.10 ikhutshwe ngezi njengezona zinto zintsha zibalaseleyo